BOOSAASO, Puntland - Dekedda magaalada Boosaaso, ee xarunta gobolka Bari ayaa markale dib u xirantay, kadib markii Ganacsatada iyo dowladda Puntland ku heshiin waayeen lacagta canshuurta cusub ee la qaadayo.
Shirar socday mudooyinkii dambe ayaa natiijo la'aan kusoo dhamaaday, markii la isku fahmi waayay Tariifo cusub oo dowladda ka qaadi doonto Raashiinka iyo qalabka kale ee laga soo dejiyo Dekedda.
Warqadda Tariifada lasoo saarey oo nuqul kamid ah uu helay Warsidaha Garowe Online ayaa ku xusan in halkii Ton [907Kg Kiilo garaam]oo Bariis, Bur, Sonkor iyo Qamadi laga qaadi doono lacag dhan 0.80USD.
Ismari-waagan taagan ayaa caqabad ku ah dhaqan-galka Heshiiskii dowladda Puntland la gashay bishii April ee sanadkan P&O ports oo laga leeyahay dalka Imaaraadka, kaasi oo dhigayo in Shirkadda ay maamusho dekedda mudo 30 sano ah, iyadoo ku maalgelinaysa ballaarinteeda iyo horumarinta adeegyadeeda qiimo lacageed oo gaaraya 336 Million oo Dollar.
Xirnaanshiyaha Dekedda Bosaso ayaa kusoo beegmaysa xilli uu Madaxweyne Gaas ka maqan yahay Puntland, iyadoo magaalada Boosaaso ay soo buux-dhaafiyeen ciidamo la sheegay inay sugayaan amniga magaalada.
Hadalkan ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warar lagu qalqal gelinayo xiriirka...
Puntland 30.11.2017. 15:14